Izindiza ezisuka eDoha ziya eMedina, eSaudi Arabia kwiQatar Airways manje
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » Izindiza ezisuka eDoha ziya eMedina, eSaudi Arabia kwiQatar Airways manje
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba • Abantu • Izindaba zaseQatar • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • I-Saudi Arabia Breaking News • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba
Ukuqala kabusha kwezinsizakalo kuzokwenza abagibeli abandiza besuka naseMedina bakwazi ukujabulela ukuxhumana okungenamthungo ezindaweni ezingaphezulu kwe-140 zenethiwekhi yomhlaba wonke yezindiza e-Asia, e-Afrika, eYurophu naseMelika ngesikhumulo sezindiza iDoha Hamad.
Izindiza zeQatar Airways zizosetshenziswa yiAirbus A320 enikela ngezihlalo eziyi-12 eFirst Class nasezihlalweni eziyi-132 eConomy Class.
Abagibeli abahamba ngezindiza besuka eMedina bazozuza kunethiwekhi yezindiza yomhlaba wonke ebanzi e-Asia, e-Afrika, eYurophu naseMelika.
Isiphathimandla sikazwelonke se-State of Qatar siyaqhubeka nokwakha inethiwekhi yaso, njengamanje emi ezindaweni ezingaphezu kwe-140.
Qatar Airways kuyathokozisa ukumemezela ukuthi kuzoqala kabusha izinsizakalo ePrince Mohammed Bin Abdulaziz International Airport, eMedina kusukela ngomhlaka 1 Okthoba 2021 ngezindiza ezine zamasonto onke. Izinsizakalo zeMedina zizosetshenziswa yinkampani yezindiza esezingeni eliphezulu i-Airbus A320 enezitulo eziyi-12 eFirst Class nezihlalo eziyi-132 e-Economy Class.
Ukuqaliswa kabusha kwezinsizakalo kuzokwenza abagibeli abandiza besuka naseMedina bakwazi ukujabulela ukuxhumana okungenamthungo ezindaweni ezingaphezu kwezingu-140 zenethiwekhi yomhlaba wonke yezindiza e-Asia, e-Afrika, eYurophu naseMelika ngeDoha Isikhumulo sezindiza i-Hamad International.
Qatar Airways indiza i-QR 1174, izosuka Isikhumulo sezindiza i-Hamad International ngo-01: 00, befika ngo-03: 15 ePrince Mohammed Bin Abdulaziz International Airport. Indiza yeQatar Airways iQR1175, izosuka esikhumulweni sezindiza iPrince Mohammed Bin Abdulaziz ngo-04: 15, bese ifika eHamad International Airport ngo-06: 25.
Isiphathimandla sikazwelonke se-State of Qatar siyaqhubeka nokwakha kabusha inethiwekhi yaso, okwamanje emi ezindaweni ezingaphezu kwe-140. I-Qatar Airways ibuye ibe nezinqubomgomo zokubhuka eziguquguqukayo ezinikeza ushintsho olungenamkhawulo ezinsukwini zokuhamba nasezindaweni oya kuzo, nezimbuyiselo ezingakhokhiswa kuwo wonke amathikithi akhishwe ngohambo agcwaliswe ngomhlaka 31 Meyi 2022.
UMsombuluko, uLwesithathu, uLwesihlanu, neSonto (zonke izikhathi zendawo)
IDoha (DOH) iya eMedina (MED) QR1174 iyahamba: 01:00 ifika: 03:15
IMedina (MED) iya eDoha (DOH) QR1175 iyahamba: 04: 15 ifika: 06:25